CC Sharmaake wuxuu talo ROOBLE ah siinayaa Taliyaha Ciidanka DF - Axadle – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Senator Cumar C / rashiid Cali Sharma’arke, ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa ka hadlay sida ra’iisul wasaare Rooble ugu guuleysan karo doorasho xor iyo xalaal ah oo dalka ka dhacda.
Cumar C / rashiid ayaa sheegay in guusha Rooble ee doorashadii dalka ka dhacday ay sabab u tahay dib u habeynta taliyeyaasha amniga dalka, maadaama uu ku lug yeeshay khilaafaadka saraakiisha iyo taliyayaasha kadib dagaaladii ka dhacay Caasimadda Muqdisho.
Sharmaarke, oo ah xubin ka tirsan Aqalka Sayidka oo aan waligii ka soo qayb galin shirkii Golaha afartii sano ee la soo dhaafay, ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu u baahan yahay jawi deggan si uu u guto waajibaadkiisa.
Kala qeybsanaanta ka dhex jirta ciidamada amniga ayaa laga yaabaa inay wiiqdo wadaxaajoodyada socda ee socda. Ra’iisul Wasaaraha wuxuu mudan yahay jawi deggan si uu ugu guuleysto wada xaajoodka una maareeyo howlaha doorashada. lana hagaajiyo ciidamada, “ayuu qoray Sharmaake. Bogga Facebook.
Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa rumeysan in Rooble uusan wali ka madaxbanaaneyn go aanada qaar waxayna ku baaqeen in kalsooni buuxda lasiiyo laamaha amaanka ee ku milmay siyaasada.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka ku wareejiyay ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble si uu u hoggaamiyo howlaha doorashada iyo guud ahaan qorshaha amniga qaranka in kastoo shaki laga qabo.
Amarkii R / wasaare Max’ed Xuseen Rooble ee ahaa in ciidamada laga soo saaro Magaalada Muqdisho, isla markaana dib loogu laabto xeryahooda ayaa wali socda, waxaana wali labada dhinac ay isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay, inkastoo Magaalada Muqdisho ay maalmihii la soo dhaafay deganeyd